Bashintshe unyawo, ucansi selutholakala nangobuchwepheshe bamakhamera
ABAMABHIZINISI ahweba ngocansi, amathoyizi namakilabhu okudanswa kuwo unqunu, sebethole izindlela ezintsha zokuqhubeka nokudayisa ucansi yize izitolo zabo zisavaliwe ngenxa yeCovid-19
Sameer Naik | June 6, 2020
UMA kukhona into eyaziwa kangcono wuSean Newman -wukuthi noma yini ethinta ucansi idayisa okwamagwinya ashisayo.
Ukuba khona kwakhe embonini yokudayisa ngezinto ezithinta ucansi iminyaka engaphezu kweyishumi, kwenze ukuthi aliqonde kahle leli bhizinisi nokwenyuka njalo kwesibalo sabantu abangena ezitolo zabo befuna okokubajabulisa ngocansi.
Kodwa muva nje le mboni yezocansi ishayeke kakhulu ngenxa yokubhebhetheka kwegciwane icoronavirus okwenze kwavalwa yonke into.
Ukuvalwa kwamakilabhu yabadansa benqunu, yilapho kubhucwabhucwana khona umuntu enqunu aze afinyelele kuvuthondaba nezinye izitolo ezihweba ngezinto ezithinta ucansi, ziquqe ngamadolo ngenxa yeCovid-19.
“Ngicabanga ukuthi akekho ongashayekile ebhizinisini noma ngabe ukuluphi uhlobo...lokhu kushayeka sisazokubona naseminyakeni eyishumi ezayo,"usho kanje.
“Ngemuva kokuthi kumenyezelwa ukuvalwa kwezwe, abantu baba sovalweni bangazi nokuthi ikusasa lisiphatheleni. Kwakungebona nje labo abanezakhiwo ngisho nabasebenzi imbala."
Njengakuwo wonke amabhizinisi, uNewman kuye kwadingeka asebenzise umqondo ngokushesha ukuze akwazi ukuphinde aziphilise kuleli bhizinsi.
Usevele wakhetha ukuthi aqhube leli bhizinisi ngobuchwepheshe bamanje bokusebenzisa izinkundla zokuxhumana.
UNewman phambilini wayengumkhulumeni wekilabhu yodumo iTeazers okwakungeka Lolly Jackson.
Usephendule indawo yokubhucwabhucwa kwabantu yaba namakhamera lapho abantu bekwazi khona ukungena estudio besebenzisa ubuchwepheshe, baxhumane nezintokazi ezisuke zibajabulisa ngocansi.
Usiza nabanye ozakwabo kule ndima ukuthi bakwazi ukufaka amakhamera ezindaweni zabo ukuze izintokazi ezidayisa ucansi zikwazi ukuxhumana namakhasimende.
Lezi zintokazi ezisuke zinqunu kumakhamera, zidayisela amakhasimende lokho abasuke bekufuna. Abafuna ukubuka owesifazane enqunu njengendlela yokuzithokozisa ngocansi, bayakuthola lokho.
Abanye abafuna ukudanselwa owesifazane enqunu nokunye okuningi amakhasimende akukhokhelayo yize umuntu esuke ezihlalele ekhaya.
UNewman uthi vele kade ayicabanga indaba yocansi kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje kodwa ukuqubuka kweCovid-19, kumphoqile ukuthi angene kulona.
Uthe kwamanye amazwe le yindllela osomabhizinisi abakule mboni abenza ngayo imali eshisiwe, kodwa eNingizimu Afrika le yinto etsha.
“Uzomangala ukuthi baningi kanjani abantu bakuleli asebesebenzisa lezi zinkundla. Baningi nabantu asebethole indlela yokuzakhela imali eshisiwe ngokuthi kube yibona abadayisa ngocansi kulezi zinkundla zokuxhumana. Abathandana bewubulili obufanayo, abazishintsha ubulili, abesifazane, izithandani nabesilisa jikelele, benza enhle imali bezihlalele emakhaya abo," kusho uNewman.
Ukholwa wukuthi le ndlela yokudayisa ucansi izosiza kakhulu ukusimamisa le mboni eshayeke kangaka ngenxa yokuvalwa kwezwe.